Ndụmọdụ 5 ị ga-eso ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka vidiyo YouTube gị pụta na ọchụchọ Google - YTpals
A na-atụ anya na ebe ọrụ YouTube nwere Google ga-akụ 210 nde na 2022. Ọtụtụ n'ime ya bụ n'ihi nnukwu ntụrụndụ na ike ịre ahịa nke vidiyo YouTube. YouTube bụkwa netwọk mmekọrịta ọha na eze nke abụọ na-ewu ewu na-esote Facebook. Ọ bụ, n'ezie, ngwá ọrụ ahịa nke 86 percent nke azụmahịa ndị na-eji ya kesaa ụdị vidiyo dị iche iche, dị ka vidiyo ngosi, vidiyo nkọwa, mgbasa ozi, na vidiyo ahịa.
As 79 percent nke ndị mmadụ na-ahọrọ ikiri vidiyo karịa ịgụ gbasara ngwaahịa, ị ga-achọ ịkwalite visibiliti nke vidiyo gị na Google Search. Nke a bụ ndụmọdụ ole na ole nwere ike inyere gị aka ịhazi vidiyo YouTube gị na Google:
1. Jiri nlezianya jiri mkpụrụokwu mee ihe maka YouTube
Algọridim ogo nke YouTube na-esiwanye ike ma na-asọ mpi ka afọ ọ bụla na-agafe. Yabụ, ịkwesịrị iji nlezianya họrọ ma jiri mkpụrụokwu dị na ọwa YouTube gị. Keywords gị maka YouTube kwesịrị ịdị mkpa maka ọdịnaya vidiyo gị ma nwee oke ọchụchọ na asọmpi dị ala. Aha vidiyo gị na nkọwa vidiyo kwesịrị ịgụnye isi okwu ka ndị crawlers Google nwee ike ịmata ha. Faịlụ vidiyo kwesịkwara inwe mkpụrụokwu iji mee ka nchọta ya na ọhụhụ dị na SERPs. Ka isi okwu gị na-elekwasị anya ma dị mkpa, ọ ka mma ka ohere vidiyo gị nwere ịhọpụta na Google Search.
2. Lezienụ anya na nkọwa vidiyo gị
Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa mana eledaghị anya bụ nkọwa vidiyo. Iji nweta vidiyo YouTube gị na Google, ịchọrọ nkọwa vidiyo nke mkpụrụedemede 1,000. YouTube na-egosi naanị ahịrị ole na ole mbụ nke nkọwa vidiyo nye ndị na-ekiri ya. Nke ahụ ga-abụrịrị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mkpụrụedemede 100. Ha kwesịrị ịpị "gosi ihe ọzọ" ka ha gụọ nkọwa zuru ezu. Yabụ, a na-atụ aro ka ịgbakwunye njikọ na webụsaịtị azụmahịa gị ma ọ bụ CTA na ahịrị ole na ole mbụ nke nkọwa vidiyo gị, nke na-ekwesịghị ịdị ogologo karịa okwu 200 na mkpokọta. Nkọwa vidiyo emeziri nke ọma na-adọta uche nke algọridim YouTube wee mee ka ha dị elu na ndepụta vidiyo atụpụtara.
3. Hazie vidiyo YouTube gị
Iji nweta vidiyo YouTube gị na Google, ndị na-ekiri gị kwesịrị ịchọ ha. Nhọrọ "ọkwa n'ihu" na YouTube na-enye ndị mmadụ ohere ịchọ vidiyo dabere na edemede. Yabụ, ị ga-ebugo vidiyo gị site na ịhazi ya ka ndị na-ege gị ntị nwee ike ịchọta ya. Ị nwere ike ịhọrọ n'ụdị nhọrọ dị iche iche. Nkeji na-enyere Google aka igosi vidiyo gị na SERP ya mgbe ndị ọrụ pịnyere mkpụrụokwu. Ọ na-enyere gị aka ịkwalite ikpughe vidiyo gị na listi ọkpụkpọ dị iche iche, nke, n'aka nke ya, na-abawanye ike iru ya n'elu ikpo okwu.
4. Hazie thumbnail gị
Vidiyo YouTube nke na-enweta ọnụma ọpịpị na-adọrọ adọrọ bụ ndị nwere obere mkpịsị aka na-adọrọ mmasị. Ọ bụ onyonyo nke ndị na-ekiri gị na-ahụ mgbe ha na-etinye cursor na vidiyo gị, na-enye ha ntakịrị nkọwa nke ọdịnaya ya. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị okike na-ahọrọ ịmepụta thumbnail site na vidiyo n'onwe ya, ị nwere ike ime mgbanwe site na ịhazi ya. thumbnail omenala na-ahụta vidiyo gị na YouTube. Ọ na-enyere gị aka ịpụ iche n'ìgwè mmadụ. Mgbe vidiyo gị na-enweta CTR dị elu yana oge nlele dị elu, ọ ga-abụ na ha ga-adị elu na ọchụchọ Google.
5. kwalite njikọ aka na ọwa gị
Ọkwa ntinye aka YouTube ị na-ewepụta ga-enwe nnukwu mmetụta na ogo vidiyo gị na ọchụchọ Google. Ọnụọgụ sekọnd ole vidiyo gị lere, nkọwa YouTube, mmasị YouTube, na ndenye aha bụ metrik dị mkpa na-egosipụta njikọ aka YouTube gị. Ịnweta ndị debanyere aha YouTube, nlele, na mmasị ga-achọ ka gị na ndị na-ege gị ntị jikọọ na ọkwa miri emi. Ọdịnaya gị kwesịrị ime ka ha nwee mmetụta mmetụta ma kpalite mmekọrịta na ọwa gị. Ka itinyekwu aka na ị na-anya, na-abawanye ohere gị nke ị nweta ọkwa dị elu na Google Search.
Jide n'aka na ị gbasoro ndụmọdụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu iji melite ogo vidiyo YouTube gị na Google. Site n'iji usoro ziri ezi mee, ị nwere ike imezu ebumnobi gị n'ezie.
Ị nwere ike ịlele YTpals maka ndị debanyere aha YouTube n'efu, mmasị YouTube efu, na nkọwa YouTube efu. Site na netwọkụ karịrị ọkara nde ndị nwe ọwa YouTube nwere afọ ojuju, YTpals nwere ike inyere ọwa YouTube gị aka ito eto.
Ndụmọdụ 5 ị ga-agbaso ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka vidiyo YouTube gị pụta na ọchụchọ Google nke ndi edemede YTpals, 18 March 2022
3 Ezigbo Ndụmọdụ tozụlite YouTube Channel Gị - Nduzi Anyị
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ịzụ ahịa dijitalụ aghọwo akụkụ dị ike karị nke mgbalị nkwado azụmahịa ọ bụla ka ndị ahịa na-anọgide na-adabere na Internetntanetị. Ọ bụ ezie na enwere ike ịnwe ọtụtụ akụrụngwa nwere ike…
Nke a bụ Ihe Need Mkpa Knowmara Banyere Nrụpụta vidiyo YouTube
Okike nke vidio vidio YouTube na-eme ngwa ngwa O doro anya na vidiyo na-achị ụwa n'ịntanetị ụbọchị ndị a. Pasent 85 nke ndị na-ere ahịa na-ekwu na vidiyo na-egosipụta oke ọfụma na ịdọta uche na ịntanetị…
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mgbasa ozi mpịakọta na YouTube
Otu n'ime mgbasa ozi a na-elegharakarị anya, mgbasa ozi post-roll, bụ ụdị mgbasa ozi na-egwu mgbe vidiyo mechara. O gosiputala nnukwu ihe ịga nke ọma maka azụmahịa nke ga - achọ ka ndị mmadụ zaghachi bọtịnụ oku na - eme ihe kama…